I-Vivo V15 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
I-Vivo V15 Pro: I-smartphone entsha enekhamera ebuyisekayo
IVivo ineveki exakekileyo. Uphawu lwaseTshayina lwasazisa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iVivo U1, imodeli yayo entsha esezantsi. Ngoku basishiya neVivo V15 ProImodeli ebizwa ngokuba yenye yeeflegi zenkampani. Ukongeza, kubonakala ubukho bekhamera erhoxiswayo. Imodeli yesibini kwiintsuku ezimbalwa ukuba nalo msebenzi.
Le Vivo V15 Pro ifikelela phakathi kuluhlu lomenzi waseTshayina. Imodeli epheleleyo, eneenkcukacha ezintle, kodwa kugxininiso olukhethekileyo kwiikhamera zayo. Ke ithembisa ukuba lukhetho olufanelekileyo malunga noku. Ukongeza kokufika ngexabiso elikhulu lemali.
Ii-smartphones zohlobo lophawu baqala ukwazisa kwiimarike ezintsha. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba kungekudala sizokwazi ngakumbi malunga nokuqaliswa kolu luhlu luphakathi eYurophu. Okwangoku, sigxila kuqala ekwazini into esinokuyilindela kuyo.
1 Iinkcukacha zeVivo V15 Pro
2 I-Vivo V15 Pro: Bet kwiifoto
Iinkcukacha zeVivo V15 Pro
Okwangoku sibona ukuba zingaphi iimveliso zaseTshayina ezizinikeleyo ekunikeni imbalasane eyodwa kwiikhamera zeefowuni zazo. Yiyo imeko ngale Vivo V15 Pro, ethembisa ukushiya uzive wonwabile malunga noku. Nangona ngokubanzi kusishiya izinto ezilungileyo kuluhlu lwazo, ongayibona apha ngezantsi:
Isikrini: Super AMOLED 6,39 intshi ngobukhulu
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 675
Ukugcina ngaphakathiI-128 GB
Ikhamera esemva: 48MP + 8MP ububanzi + 5MP
Ikhamera yangaphambiliubukhulu: 32MP
ConectividadI-GPS, i-GLONASS, i-4G / i-LTE, i-WiFi 802.11 a / c, iBluetooth
Inkqubo yokusebenzaI-Android Pie ene-Funtouch OS 9 njengobume bokwenza ngokwezifiso
Ibhetri: 3.700 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
abanyeI-3.5mm i-headphone jack, i-USB-C, isivamvo seFingerprint kwiscreen
IVivo ayisiyonto ingaqhelekanga ekusebenziseni ikhamera enokurhoxiswa kwiifowuni zayo. Ibrand yayisele isishiyile iVivo NEX, eyayinolu hlobo. Nangona kule meko sifumana isivamvo esingcono kakhulu, esiya kusinika ukusebenza okungcono. Kule modeli sasisele sinayo okunye ukuvuza kwezi veki.
Ke besele sisazi ukuba sinako Lindela ikhamera ebuyisekayo kule Vivo V15 Pro. Ikhamera yenye yezona zinto ziphambili kwifowuni, njengoko ubona. Iikhamera zangasemva zefowuni yenye yezinto eziphambili.
I-Vivo V15 Pro: Bet kwiifoto
Ikhamera yefowuni ebuyisekayo Isishiya sinesivamvo esingama-32 se-megapixel. Inzwa enamandla kakhulu kwikhamera yangaphambili, ngokungathandabuzekiyo ethembisa ukunika umdlalo omninzi kubasebenzisi abathenga le modeli. Nangona inkampani ingakhange ifumane izixhobo kwiikhamera zayo zangasemva nokuba.
Sifumana ikhamera yangemva kathathu. Eyokuqala yee-sensors zii-megapixels ezingama-48, Iipikseli eziyi-0.8µm (1.6 4m ukuba usebenzisa amaqela angama-1 ukuya kwayi-1.8) kunye nomngxuma we-f / XNUMX. Inemodi yasebusuku ephezulu edibanisa iifoto ezininzi kunye nokuchazwa okwahlukileyo ukuze ukucaciswa kwemifanekiso emnyama kuphuculwe.
Isenziwoluvo soluvo sikhatshwa ilensi ebanzi ye-engile, ii-megapixels eziyi-8 kunye nefayile ye- Isivamvo esinzulu se-megapixel eyi-5, enemisebenzi eyongezelelweyo enkosi kubukho bobukrelekrele bokufakelwa kuyo. Ngokwendlela yoyilo, ifemi ifune ukwenza uninzi lwangaphambili ngesixhobo, kuba isikrini sayo sihlala kwi-91,64% yangaphambili.
Inzwa yeminwe idityanisiwe kwiscreen esibonisiweyo, ke siyabona ukuba inani lee-smartphones ezineli nqaku liyaqhubeka ukwanda kwintengiso. Kwibhetri, umthamo we-3.700 mAh usetyenzisiwe, okuza kunye nokutshaja ngokukhawuleza. Enkosi ngayo, ibhetri yale Vivo V15 Pro isuka kwi-0% iye kwi-24% kwimizuzu eli-15.
Okwangoku akukho nto sele ikhankanyiwe malunga nokuqaliswa kwale Vivo V15 Pro kumazwe aphesheya. Ukusukela nge-Matshi 6, isungulwe kwiimarike zaseAsia, njengeIndiya neChina. Inokubhukishwa ngoku kwezi marike, njengoko inkampani iqinisekisile. Ixabiso layo likwabonakalisiwe.
Le Vivo V15 Pro ifika ngexabiso lama-euro angama-360 ngokutshintshiselana. Siyathemba ukuva ngakumbi malunga nokuqaliswa kwayo kwamanye amazwe kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Vivo V15 Pro: I-smartphone entsha enekhamera ebuyisekayo
IsiKhangeli seKiwi sisikhangeli esikhawulezayo nesithuleyo esiya sithandwa
I-DXOMark ityhila inqaku lekhamera leXiaomi Mi 9: liphezulu kakhulu!